पहिले गिट्टी कुट्ने कम्यूनिष्ट हुन्थे, अहिले गिट्टी र बालुवाका ठेकेदार कम्यूनिष्ट छन् ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	पहिले गिट्टी कुट्ने कम्यूनिष्ट हुन्थे, अहिले गिट्टी र बालुवाका ठेकेदार कम्यूनिष्ट छन् ! » Nepal Fusion
पहिले गिट्टी कुट्ने कम्यूनिष्ट हुन्थे, अहिले गिट्टी र बालुवाका ठेकेदार कम्यूनिष्ट छन् !
२०७६ साउन २५ गते शनिवार
काठमाडौ ‘पहिले गिट्टी कुट्ने कम्यूनिष्ट हुन्थे, अहिले बालुवा र गिट्टीका ठेकेदार कम्यूनिष्ट छन्’ नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने ‘हलो जोत्ने किसान कम्यूनिष्ट हुनुपथ्यो तर यहाँ जग्गा दलालहरु कम्यूनिष्ट बनेका छन् । सिंहदरवारदेखि बालुवाटारसम्म उनीहरुकै रजगज चलेको छ ।
काठमाडौं। सर्वहारा बर्गको जीवन उत्थानको मुल उदेश्य बनाएर गठन भएका कम्यूनिष्ट पार्टी दलाल र ठेकेदारको समुह बनेको भन्दै निष्ठावान नेताहरुले आक्रोस पोख्न थालेका छन् ।
गरीव बर्गको उत्थान गर्नेभन्दै २००६ सालमा कम्यूनिष्ट पार्टी निर्माण भएको थियो । लामो संघर्षको यात्रापछि कम्यूनिष्ट पार्टी देशको सत्ता सञ्चालनमा छन् । तर सत्ताको स्वाद सर्वहाराले नभई दलाल र ठेकेदारले लिइरहेका छन् ।
‘पहिले गिट्टी कुट्ने कम्यूनिष्ट हुन्थे, अहिले बालुवा र गिट्टीका ठेकेदार कम्यूनिष्ट छन्’ नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने ‘हलो जोत्ने किसान कम्यूनिष्ट हुनुपथ्यो तर यहाँ जग्गा दलालहरु कम्यूनिष्ट बनेका छन् । सिंहदरवारदेखि बालुवाटारसम्म उनीहरुकै रजगज चलेको छ ।